I-Wolder yaseSpain iyekelela kwingxaki yefowuni ephathekayo | Iindaba zeGajethi
I-Wolder yaseSpain iye yanikezela kwingxaki yefowuni ephathekayo
Ukuthengiswa kweefowuni eziphambili zeefowuni kuye kwehla kakhulu kwiinyanga ezidlulileyo, kakhulu kangangokuba nesona siphelo sihle kakhulu esisibonileyo kule minyaka idlulileyo, kwaye asithethi ngesinye isixhobo ngaphandle kwe-Samsung Galaxy S8, enikezela ukuthengisa malunga ne-20% isezantsi kunaleyo ibinikezelwa yimodeli yangaphambili kwangoko. Nangona kunjalo, abona bantu banesifo ekuthiwa yi "Mobile Phone Crisis" ziinkampani ezincinci ezinengeniso ephantsi kakhulu.
Enye yeenkampani zelizwe eziphumelele kakhulu kwezobuchwephesha kule minyaka idlulileyo inesiphelo esikufutshane kakhulu ekungekho nto sinokuyenza ngaphandle kokuzisola ngayo. IWolder, inkampani esiyilandele ngaphezu kwesihlandlo esinye kwesi sixhobo, ikwiiyure zokugqibela.
Nangona kuyinyani ukuba sijamelene nendlela yokuvelisa yaseTshayina kunye nendlela yoyilo, eqaqanjisiweyo amaxesha amaninzi, nangona kunjalo i-Wolder kwiinkalo ezininzi ikhethe ukwenza idemokhrasi kwicandelo lobuchwephesha laseSpain, unikezela ngeemveliso njengezona pilisi zihlengahlengisiweyo ngokwexabiso lomgangatho nemanyano neenkampani zefowuni. Ukulandela oku emva kwe-BQ, inkampani ethi kwanabo baxhase ukuqala kwayo okunje ngeMovistar sele beqalile ukufulathela.
Oku sele kuqale ukuphulukana nokuzithemba komsebenzisi wesizwe ngokubanzi, kangangokuba I-Wolder ihlala ithwala iflegi yokuba yinkampani ethengisa ezona pilisi zininzi eSpain, Leyo yamacwecwe ngokuchanekileyo yintengiso yezixhobo eziphathwayo eziwe kakhulu kwaye zafumana ubunzima bexesha, kangangokuba iApple iqala ukuzibeka njengekuphela kwayo enika imveliso ekufuneka ithathelwe ingqalelo. Ke emva kokujoyina imikhosi kunye neJazztel kunye neMasterchef, iqela le Uqoqosho lwedijithali ibonisa ukuba iWolder ithengise kakhulu ukuthengisa kwaye ayithathanga ngqalelo ukwehla okubalulekileyo kwintengiso. Ukudada kukude, nangona ithemba lihleli, nangona abathengisi beyekile ukufumana imveliso iiveki.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Wolder yaseSpain iye yanikezela kwingxaki yefowuni ephathekayo
ISpain ikhokelela kwiintlawulo "ezingenakunxibelelana" ngexesha lokuhlawulwa kweselfowuni